[Akụkụ nke anọ] LMDE na omimi: Inweta na arụmọrụ | Site na Linux
Mgbe ndozi, melite y nhazi nke ụfọdụ akụrụngwa en LMDEKa anyị hụ otu esi enweta obere arụmọrụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị nwere obere kọmpụta dị ike ma ọ bụ na ị bụ, dị ka m, otu n'ime ndị na-achọ iji ohere ọ bụla na RAM.
Ọtụtụ n'ime ndụmọdụ m na-eweta n'okpuru nwere ike nweta site na iji ngwaọrụ nke Mint n'onwe ya webatara, yabụ m ga-egosi gị ụzọ abụọ iji mee ya.
2 Na-achọta na Desktọpụ.
3 Iwepụ Fortunes.
4 Ngwa na mmalite.
5 Nhọrọ ndị ọzọ:
6 Ka m nọọrọ TTY:
Ihe mbụ anyị ga - eme bụ itinye onwe anyị ogwugwu. Ihe ngwugwu a ozugbo emere ka anyị nwee ike ịchịkwa usoro ndị a na-amalite mgbe sistemụ malitere.
$ sudo ikike wụnye rcconf
Ozugbo emechara usoro ahụ, anyị nwere ike ịga ya n'ụzọ abụọ. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka arụ ọrụ ndị ahụ e gburu ma ọ bụ kwụsị n’oge ahụ, anyị na-egbu:
$ sudo rcconf - ugbu a
ọ bụrụ na anyị chọrọ ka a ghara igbu usoro ahụ n'oge ahụ:
Anyị kwesịrị inweta ihe dịka nke a:
N'ebe ahụ, anyị nwere ike ịhọrọ site na oghere oghere, usoro anyị chọrọ ịmalite na sistemụ. N'okwu m, m na-ewepu ihe ndị a:
exim4 (Ọ bụrụ na anyị ewepụtaghị exim).
Na-achọta na Desktọpụ.
LMDE dika e si nweta LinuxMint, gụnyere Mintools, na n’etiti ha MintDesktop. Na MintDesktop Anyị nwere ike ịme ọtụtụ ihe, mana ugbu a naanị anyị nwere mmasị na 2 n'ime ha.
Na ngalaba Windows, anyị na-ama akara nhọrọ nke gosipụtara na oyiyi dị n'okpuru.
Ihe nke a ga - eme gbanyụọ nsonaazụ nke egosiri mgbe anyị bulie ma ọ bụ belata windo, yana ọdịnaya nke folda ahụ anaghị egosipụta mgbe ị na-adọkpụ ha.
Anyị nwere ike nweta otu ihe ahụ site na iji Gconf-Onye nchịkọta akụkọ. Maka nke a anyị na-emezu F2 dị elu anyị na-ede nchịkọta akụkọ gconf E mesịa anyị ga-eme ya ngwa »metacity» izugbe »belata_resources ma anyị họrọ ya.
Otu n'ime ihe ndị ọrụ LinuxMint ha na-eti mkpu, ga-enwe nhọrọ iji gbanyụọ Ogologo, nke bụ ihe ọ bụla karịa ozi na-apụta na anụmanụ na oge ọ bụla anyị na-emeghe console. Na MintDesktop nwekwara ike nweta na ngalaba ọnụ.
Ma obu anyi puru imeghe onu ma tinye:
Anyị na-achọ akara nke na-ekwu, sị:
/ usr / bin / mint-uba
na anyị gbanwee ya:
# / usr / bin / mint-uba
Ngwa na mmalite.
Ugbu a, anyị nwekwara ike ime ka usoro ahụ dị ntakịrị site na iwepu ngwa / daemons na-amalite mgbe anyị banyere oge anyị. Maka nke a anyị na-aga NchNhr »Ngwa» Mmasị »Ngwa na mbido.
Ebe ma ọ dịkarịa ala m, weghachite nhọrọ ndị a:
Bipute Queue Applet
Kekọrịta faịlụ nke onwe.
Remote na Desktọpụ.
Gnome Banye Soundda.
Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Evolution.
Usoro Pulseaudio Sound.
Anyị kwesịrị iburu n’uche na m na-agbanyụ ihe na-adịghị m mkpa. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka ụfọdụ n’ime ndị mmụọ ọjọọ ndị a bido na mbụ, mgbe ahụ gbanyụọ ya. : d
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịga n’ihu ntakịrị, anyị nwere ike wepu ụfọdụ ihe ndị ọzọ, dịka mintMenu ma tinye menu Gnome, ma ọ bụ jiri aka jikwaa netwọk ahụ ma ọ bụghị site Ntanetị Network.
Ihe si na ihe niile m gosiri gị n’isiokwu a bụ na PC m nwere 1Gb RAM banye na 68Mb oriri na RAM.
Ka m nọọrọ TTY:
Zọ ọzọ iji bulie akụrụngwa bụ iwepu ụfọdụ TTY na iji naanị ndị dị mkpa. Maka nke a, anyị dezie faịlụ ahụ / wdg / nwebata.
sudo gedit / wdg / ọzọ
Anyị na-ele ebe ọ na-ekwu nke a:
1: 2345: maliteghachi: / sbin / getty 38400 tty1
2: 23: maliteghachi: / sbin / getty 38400 tty2
3: 23: maliteghachi: / sbin / getty 38400 tty3
4: 23: maliteghachi: / sbin / getty 38400 tty4
5: 23: maliteghachi: / sbin / getty 38400 tty5
6: 23: maliteghachi: / sbin / getty 38400 tty6
na anyị na-aza ndị na-adịghị anyị mkpa. N'okwu m, m na-ahapụ 2:
# 3: 23: mbughari: / sbin / getty 38400 tty3
# 4: 23: mbughari: / sbin / getty 38400 tty4
# 5: 23: mbughari: / sbin / getty 38400 tty5
# 6: 23: mbughari: / sbin / getty 38400 tty6
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » [Akụkụ nke anọ] LMDE na omimi: Inweta na arụmọrụ
M hapụrụ gị + 1
Daalụ tụnyere 😀
Ọzọ +1, ma ọ bụrụ na e nwere + 20 m ga-enye gị ya 😉
Obi dị m ụtọ na ọ na-ejere gị ozi ^^
Daalụ nke ukwuu, ntuziaka LMDE bara ezigbo uru.
Ekele si Chile.
M hụrụ ya n'anya, etinye m ya n'ọrụ ma ọ dị ịtụnanya. Enwere m ajụjụ 2 gbasara LMDE ma ha bụ:
- Gini mere ụdị 64bit ji amalite ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ megabytes 80 karịa ụdị 32bit ahụ?
- Ọ dị onye hụrụ nkuzi a na ụdị 64bit?
IHE: na ụdị 32-bit nke a na-agagharị !!!
Capsol dị mfe, nke bụ eziokwu bụ na nsụgharị 64-bit ga-eri ihe karịa nsụgharị 32-bit ma ọ bụrụ na ị gbalịa kde, a ga-ahapụ gị n'ọnụ gị imeghe ihe ọ na-eri na 64-bit na kama ihe nkịtị nke na-aga Na 32.
Ezigbo usoro isiokwu, daalụ.
Daalụ maka ịkwụsị site 😀
Kedu ka m ga-esi gbanwee GDM nke LMDE nwere na ndabara
dị nnọọ mma 🙂
BookWorm, akwụkwọ elementrị e-akwụkwọ?